December 18, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on Turkiga oo safaarad ka furanaya Bariga magaalada Quddus
Isniin, December, 18, 2017 (HOL) – Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Axadi maanta sheegay in Dowladiisu rajeyneyso in ay safaarad ka furato caasimada Falastiin ee Bariga Quddus, mustaqbalka. Wuxuu sheegay in Bariga Quddus ay hadda heysato Israel sidaasi daraadeedna aysan ka furan karin wax safaarad ah, balse ay rajeynayaan in ay soo dhawaatay […]
December 18, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on Maamulka gobolka Banaadir iyo UNHCR oo iska kaashanaya dib u dayactirka dugsiyada magaalada Muqdisho
Isniin, December, 18, 2017 (HOL) –Maamulka Gobolka Benaadir oo uu hoggaaminayo Guddoomiyaha gobolka ahna duqa Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed ayaa daah furay dib u dayactirka iyo qalabeynta dugsiyada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale kor-u-qaadista adeegyada waxbarashada ee caasimada Muqdisho. Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan Qaxootiga ee UNHCR iyo maamulka gobolka Benaadir ayaa mashruucan iska kaashanaya. […]
December 18, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on Ciidamada Amaanka oo saakay xiray qeybo ka mid ah waddooyinka magaalada Muqdisho
Isniin, December, 18, 2017 (HOL) – Ciidamada Amaanka dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray inta badan wadooyinka Magaalada Muqdisho, iyagoo joojiyey dhamaan gaadiidka dadweynaha ee wadooyinkaas isticmaali jiray. Wadooyinka xiran ayaa waxaa ka mid ah Maka Al-Mukarama, nawaaxiga Km4, isgoysyada Zoope iyo Banaadir iyo qaar kale. Ciidamada Amaanka dowlada Somalia oo ku hubeysan gaadiidka dagaalka […]
December 18, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on Ciidamada dowladda oo la sheegay in ay xireen Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsame
Isniin, December, 18, 2017 (HOL) – Faah faah dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar xalay lagu qaaday hoyga Magaalada Muqdisho uu ka degan yahay Siyaasiga C/raxmaan Cabdi Shakuur Warsame oo ku yaalla Degmada Wadajir, gaar ahaan meel ku dhaw Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde. Ciidamada dowladda ayaa beegsaday gurigaasi, saqdii dhexe ee xalay, waxaana […]
December 18, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on Duuliye Sare Cabdi Rodol oo loo magacaabay Maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista Somaliland.
Duuliye Sare Cabdi Maxamed Rodol, Maareeyaha Cusub ee Hay’adda Duulista Somaliland Isniin, December, 168 2017 (HOL) – Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweyne Muuse Biixi ayaa lagu magacaabay Duuliye Sare (Capt) Cabdi Maxamed Rodol maareeyaha Guud ee Hay’adda Duulista Somaliland. Duuliye Sare Cabdi Rodol ayaa wuxuu ka mid ahaa duuliyayaashii sharikaddii Somali Airlines, wuxuuna ahaa […]
December 17, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on War Deg-Deg ah: Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo gurigiisa lagu weeraray
Axad, December, 17, 2017 (HOL) – Warar xogogaal oo soo gaaray HOL ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan Nabadsugidda Soomaaliyeed ay weeraree guriga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Wararku waxay intaa ku darayaan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur ku dhaawacmay weerarkaas isla markaasna ay halkaas ku dhinteen labo ka mid ah ilaaladiisa. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta keentay in […]
December 17, 2017 Warka Dalka
WASHINGTON. D.C — Xidigii hore ee kooxda AC Milan iyo xulka Brazil Recardo Kaka ayaa maanta ku dhawaaqay inuu ka fariista dheelida ciyaaraha kubadda cakta. Kaka oo sanadki 2007 ku guuleystay laacibka adduunka, ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta Globo Sporte ku sheegay in kadib marki uu la tashaday qaar ka mid ah qoyskiisa, uu go,aan […]
WASHINGTON. D.C — Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Axadi maanta sheegay in Dowladiisu rajeyneyso in ay safaarad ka furato caasimada Falastiin ee Bariga Qusus, mustaqbalka. Wuxuu sheegay in Bariga Qudus ay hadda heysato Israel sidaasi daraadeedna aysan ka furan karin wax safaarad ah, balse ay rajeynayaan in ay soo dhawaatay maalmihi ay sida rasmiga […]
Wariye Boqorka Bartamaha oo Muqdisho Gaaray
WASHINGTON. D.C — Waxaa maanta magaalada Muqdisho gaaray wariye Maxamed Aweys Muudeey (Boqorka Bartamaha) oo muddo ka badan 4 sano ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Ethiopia. Maxkamad ku taalla dalka Ethiopia, ayaa Maxamed Aweys Muudey ku xakuntay 25 oo xabsi ah, balse dadaal dheer oo ay u gashay Dowlada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa […]
Ururrada bulshada rayidka ah ee Jubbaland oo sheegay in aan lagu casuumin shirka arimaha dastuurka
December 17, 2017 Warka DalkaLeave a Comment on Ururrada bulshada rayidka ah ee Jubbaland oo sheegay in aan lagu casuumin shirka arimaha dastuurka
Axad, December, 17, 2017 (HOL)–Kulaan ay isugu yimaadeen masuuliyiinta dallada ururrada aan dowliga ahayn ee Jubbaland (JUNSAA) ayaa waxa ay uga soo horjeesteen shirka looga hadlayo hannaanka dib u eegista dastuurka ee ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dastuurka dowladda Soomaaliya ayaa waxaa ka qeybgalaya masuuliyiinta ururrada bulshada […]